BUDDHIST TERMS' Dictionary: CONSECRATION - ဗုဒ္ဓါဘိသေက
CONSECRATION - ဗုဒ္ဓါဘိသေက
ဗုဒ္ဓါဘိသေက - ဗုဒ္ဓါဘိသေကမင်္ဂလာပြုခြင်း၊ ဘုရားဆင်းတုတော်ကို အနေကဇာတင်ခြင်း။
မြတ်စွာဘုရားသည် ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူသောအခါ အနေကဇာတိသံသာရံ စသော ဂါထာတော်ဖြင့် ဥဒါန်းကျူးတော်မူခဲ့သည်။ ဤဂါထာသည် မြတ်စွာဘုရား ပထမဆုံးစိတ်တော်ဖြင့် ဆင်ခြင်သည့် ပထမဗုဒ္ဓ၀စန ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် ဆင်းတုတော်များကို မြတ်စွာဘုရား အမှတ်ဖြင့် ကိုးကွယ်လိုသောအခါ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ဘုရားဖြစ်ပြီးစ အချိန်၌ ပထမဆုံး ဥဒါန်းကျူးခဲ့သည့်အတိုင်း မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်သံဃာတော်များက မြတ်စွာဘုရား၏ ကိုယ်စား အနေကဇာတိသံသာရံ စသော ဂါထာတော်ကို ရွတ်ဆိုတော်မူကြသည်။ ယင်းတို့ ပူဇော်ခြင်းကို အနေကဇာတင်သည်ဟု ခေါ်သည်။
Buddhabhiseka maṅgala, consecration of an image of the Buddha.
Soon after his attainment of Enlightenment, the Buddha breathed forth two verses of exultation (udᾱna-gᾱthᾱ), the first words of which are “anekajᾱtisaṁsᾱraṁ” (infinitely numerous are the existences in the round of rebirths). These are the Buddha’s first words, “pathama Buddha vacana” which were uttered after his contemplation of Buddhahood. That is the reason why, when the Buddhists wish to have Buddha images consecrated, the Saṁgha, symbolically taking the place of the Buddha would recite the above verses, just as the Buddha had done on his attainment of Buddhahood. This ceremony is known as consecration of anekajᾱ ceremony.